သင်္သကရိုက်ပြဇာတ် - ဝီကီပီးဒီးယား
အိန္ဒိယဂန္ထဝင်ဒရာမာ ဟူသောဝေါဟာရသည်ရှေး အိန္ဒိယ၌ ထင်ရှားသောစာပေနှင့်စွမ်းဆောင်မှုတို့၏အစဉ်အလာကိုရည်ညွှန်းသည်။ အိန္ဒိယတိုက်ငယ်တွင်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၏မူလအစကိုဘီ။ စီ။ အီး။ ၂၀၀ အစောပိုင်းကတွေ့ရှိနိုင်သည်။  ယင်း၏ဒရာမာသည် Sanskrit စာပေ ၏အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုအဖြစ်မှတ်ယူသည်။  ဗုဒ္ဓစရိတ ရေးစပ်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာ အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Asvaghosa သည်ပထမဆုံး Sanskrit သင်္ကေတဖြစ်သည်။
ယင်း၏အမည်ကိုကြားရသော်လည်းဂန္ထဝင် Sanskrit ဒရာမာသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောသဘာဝကိုပေးသော Sanskrit နှင့် Prakrit ဘာသာစကားများကိုအသုံးပြုသည်။  Sanskrit ဒရာမာအသုံးပြုသွားမည် စတော့ရှယ်ယာဇာတ်ကောင် ဖြစ်တဲ့သူရဲကောင်း (nayaka) အဖြစ်, သူရဲကောင်း (nayika), သို့မဟုတ်လူရွှင်တော် (vidusaka) ။ မင်းသားတစ် ဦး အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားအတွက်အထူးပြုခဲ့ကြပေမည်။ Patañjali အားဖြင့် Mahābhāṣya Sanskrit Sanskrit ဒရာမာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်အရာကိုအစောဆုံးရည်ညွှန်းပါရှိသည်။  ပေါ်မှာဤကျမ်း သဒ္ဒါ ၏စတစ်ဖြစ်နိုင်သည့်ရက်စွဲကိုထောက်ပံ့ပေး အိန္ဒိယတွင်ပြဇာတ်ရုံ ။ 
Kālidāsa အဆိုပါ 4th-5 ရာစုအတွက်ပွဲတစ်ပွဲရှေးခေတ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် အိန္ဒိယ 's အကြီးမားဆုံးသော Sanskrit dramatists ။ Kālidāsaကရေးသားသုံးကျော်ကြားရင်ခုန်စရာပြဇာတ်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း Mālavikāgnimitram (Mālavikāနှင့် Agnimitra), Vikramōrvaśīyam (Vikrama နှင့် Urvashi မှခွု), နှင့် Abhijñānaśākuntalam (Shakuntala များ၏အသိအမှတ်ပြု) ။ နောက်ဆုံးကို Mahabharata မှ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခြင်းနှင့်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အင်္ဂလိပ် နှင့် ဂျာမန် ဘာသာသို့ပထမဆုံးဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ untakuntalā (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆို) သည် Goethe's Faust (1808-1832) ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။  နောက်ထပ်ကြီးကျယ်သောအိန္ဒိယပြဇာတ်ဆရာသည် Bhavabhuti (စီ။ အီး။ ၇ ရာစု) ဖြစ်သည်။ သူသည်အောက်ပါပြဇာတ်သုံးခုကိုရေးသားခဲ့သည်ဟုဆိုသည် - Malati-Madhava, Mahaviracharita နှင့် Uttararamacarita ဤသုံးပါးအနက်နောက်ဆုံးနှစ်ခုသည် ရာမရာ ၏ ဇာတ်ကြောင်း တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ အဆိုပါအစွမ်းထက်အိန္ဒိယဧကရာဇ် Harsha ဟာသ: (606-648) သုံးပြဇာတ်ကျမ်းစာ၌ရေးထားဘဲလျက်နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြု Ratnavali, Priyadarsika, နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒရာမာ Nagananda ။ အခြားအကျော်ကြား Sanskrit dramatists ပါဝင်သည် Śhudraka, Bhasa နှင့် Asvaghosa ။ ဤပြဇာတ်ရေးဆရာများမှရေးသားထားသောပြဇာတ်မြောက်မြားစွာကိုရရှိနိုင်ဆဲဖြစ်သော်လည်းစာရေးသူကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသိရှိရသည်။
Bhāsaရေးသောပြဇာတ်များကိုသမိုင်းပညာရှင်များထံမှနောက်ပိုင်းတွင်စာရေးသူများ၏ရည်ညွှန်းချက်များမှသာသိခဲ့ရသည်။ သူရေးသားခဲ့သောပြဇာတ် ၁၃ ပုဒ်၏လက်ရေးမူများကို ၁၉၁၃ ခုနှစ်တွင် Thiruvananthapuram (Trivandrum) ရှိစာကြည့်တိုက်အဟောင်းကိုပညာရှင် Ganapati Sastri မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၄ ကြိမ်မြောက်ပြဇာတ်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်Bhāsaအားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း၎င်း၏ရေးသားမှုမှာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။
Bhāsa၏အကျော်ကြားဆုံးပြဇာတ်များမှာ Svapnavasavadattam (Swapnavāsadatta) ("Vasavadatta ၏အိပ်မက်"), Pancharātra နှင့် Pratijna Yaugandharayaanam (" Yaugandharayana ၏သစ္စာဂတိများ") ဖြစ်သည်။ အချို့သောပြဇာတ်များမှာ Pratimanātaka, Abhishekanātaka, Bachacharita, Dtavākya, Karnabhāra, Dūtaghatotkacha, Chārudatta, Madhyamavyāyoga နှင့် ubrhahaga ။
ကာရ်နာဘာရမ် သည်ပြင်းထန်စွာချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည့်ပြဇာတ်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယရှိ ခေတ်သစ်ပြဇာတ်ရုံအဖွဲ့များမှစမ်းသပ်မှုများစွာကိုပြုလုပ်နေသည်။
Bhāsaသည် Kalidasa ပြီးလျှင်ဒုတိယနေရာ၌အကောင်းဆုံး Sanskrit Sanskrit ပြဇာတ်ရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် Kalidasa ထက်စော။ အေဒီ ၃၊ ၄ ရာစုမှရက်စွဲပါသည်။  
Bhasa 's Swapnavasavadattam Koodiyattam မှ ဘုရင် Udayana သည်ရှေးဟောင်း Sanskrit ဇာတ်ရုံဖြစ်သည်။ (အဆိုတော် Mani Damodara Chakyar )
Srjan မှထင်ရှားသောအိန္ဒိယ Dance Drama၊ Tantram  ၊ Vanikavi မှရေးသားသော Script
Vidyadhar Shastri က သင်္ကသရိုက် ပြဇာတ်သုံးခုကိုရေးသားခဲ့သည်။ <i id="mwATA">Purnanandam</i>, Kalidainyam နှင့် Durbala Balam ။
Prafulla Kumar Mishra သည် Chitrangada နှင့် Karuna ပြဇာတ်များကိုရေးသားခဲ့သည်။
↑ Robert Barton, Annie McGregor (2014-01-03)။ Theatre in Your Life။ CengageBrain။ p. 218။ ISBN 9781285463483။
↑ Sanskrit Drama in Performance။ Motilal Banarsidass။ 1993။ pp. 25–။ ISBN 978-81-208-0772-3။
↑ Robert E. Goodwin (1998), The Playworld of Sanskrit Drama, Introduction, pg. xviii
↑ Moriz Winternitz, History of Indian Literature, p.204-205
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သင်္သကရိုက်ပြဇာတ်&oldid=683492" မှ ရယူရန်